खुसीको खबर: सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार जापान जान पाउने, जम्मा लागत कति ??::आर एम खबर
खुसीको खबर: सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार जापान जान पाउने, जम्मा लागत कति ?? जापान सरकारले नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेसँगै भाषा पढ्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कामदारको रुपमा न्यून लगानीमा जापान जान पाइनेभएपछि नेपाली युवाहरु त्यसको तयारीमा जुटेका हुन् । तर पनि आधिकारिक जानकारी नहुँदा जापानले कसरी र कहिले देखि कामदार लैजान्छ भन्ने अन्यौंल कायमै छ । हालसम्म सरकारी स्तरबाट कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । विभिन्न हल्लाकाबीच नेपाली युवाहरु भाषा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
सरकारी संयन्त्रबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्न जापान सहमत भएको छ । जापानले पारित गरेको श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाललाई पठाई सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार भर्ना गर्न तयार रहेको जनाएको हो । जपानको निर्णयसँगै कोरिया जस्तै सरकारी संयन्त्रबाट जापान जान पाउने निश्चित भएको छ ।
यो समझदारीलाई जापानले दुई देशबीच ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ (एमओसी) भनेको छ । उसले आउँदो मार्चको अन्तिम साता दुई देशबीच एमओसी गर्न प्रस्ताव राखेको छ । जुन सचिवस्तरमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
गत जनवरीको दोस्रो साता काठमाडौंमा नेपाल र जापानबीच सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले कामदार भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुन नहुने प्रस्ताव राखेको थियो । जापानले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार भर्ना गर्ने सहमति जनाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागभित्रै एउटा इकाई राख्ने तयारी गरेको हो।
जापानी नागरिक सरह तलब
जापानले आफ्नो देशको नागरिकले पाउने न्यूनतम तलबसरह नै विदेशी कामदारलाई दिने जनाएको छ । जापानको स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कामदारलाई प्रतिघण्टा घटीमा ६ सय ७३ देखि बढीमा ८ सय ७४ जापानी येन (हालको विनिमय दरअनुसार ९ सय ७८ रुपैयाँ) सम्म पाइरहेका छन् ।
मस्यौदामा जापानले चौथो तहको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारलाई मात्रै छनोट गर्ने उल्लेख छ । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) ५ तहको छ । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा (दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने) बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो । जापान जाने श्रमिकको लागत खर्च भने अझै टुंगिएको छैन ।
नेपालले शून्य लागतमा कामदारको भर्ना हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । जापानी पक्षले प्रक्रियामा रहेको समझदारीलाई बाहिर नलैजान नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेको हुँदा श्रम मन्त्रालयले यसबारे विस्तृत विषय सार्वजनिक गरेको छैन । जापानले पहिलो पटक विदेशी श्रमिक लैजाने नीति लिएको हुँदा कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने विषयमा आफैं प्रस्ट देखिएको छैन ।
जापानले आफ्नो देशमा कामदार अभाव हुन थालेपछि आउँदो अप्रिलबाट दक्ष र अदक्ष विदेशी कामदारको आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालका लागि ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिकको भर्ना गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालबाट लैजाने श्रमिकको संख्या तोकिसकेको छैन । दक्ष श्रमिकको भिसाको अवधि पाँच वर्ष र अदक्ष श्रमिकको भिसा अनिश्चित छ । जापानले सरकार–सरकारबीच दुई पक्षीय श्रम समझदारी भए पनि निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसार श्रमिकको भर्ना हुने जनाएको छ ।